11 Ciyaartoy Oo Ka Maqnaan Doona Manchester United Kulanka Crystal Palace Ee Sabtida - Gool24.Net
11 Ciyaartoy Oo Ka Maqnaan Doona Manchester United Kulanka Crystal Palace Ee Sabtida
Tababaraha Manchester United, Ole Gunnar Solskajer ayaa ka walaacsan tirada xad-dhaafka ah ee ciyaartoyda kooxdiisa ee ka maqnaan doona kulanka ugu horreeya ee ay ciyaarayaan horyaalka Premier League oo ay Sabtida ku marti-gelinayaan Crystal Palace.
United ayaa qaadatay toddobaad dheeraad ah oo fasax ah iyadoo naadiyada kale ciyaarayeen, waxaanay sababtu ahayd in illaa xilli dambe oo bishii August ah ay ku jireen tartanka Europa League oo semi-finalka ay ku reebtay Sevilla.
Inta badan kooxaha Premier League marka laga reebo labada Manchester waxa u bilaabmaya usbuucii labaad, halka ay labadan kooxood iyo kuwii ay la ciyaari lahaayeenna min usbuucoodii ugu horreeyey u bilaabmayo.
Red Devils waxa saaran culays xataa iyaga oo toddobaadkii hore ay nasasho u ahayd, waxaana lagu soo warramayaa in 11 ka mid ah kooxda koowaad aanay diyaar u ahayn kulanka adag ee Crystal Palace oo kulankii hore 1-0 kusoo muquunisay Southampton.
Wargeyska MEN ee kasoo baxa magaalada Manchester, ayaa waxa uu shaaciyey in 11 ciyaartoy oo ay ka mid yihiin Pual Pogba, Juan Mata, Fred, Aaron Wan-Bissaka iyo Eric Bailly ay tababarka kusoo laabteen Isniintii doraad, sidaas daraadeedna ay adag tahay inuu tababare Pep Guardiola kusoo bilaabo kulanka Sabtida.
Kubbad-sameeyaha reer Portugal ee Bruno Fernandes ayaa isaguna dhawr maalmood oo kaliya kasoo horreeyey xiddigahan kaddib markii uu kulamadii UEFA Nations League u ciyaaray waddankiisa.
Phil Jones oo muddo dhaawac ku maqnaa ayaa taam soo noqday intii ay ciyaaruhu fasaxa ahaayeen, laakiin sida uu wargeyska MEN sheegay lama filayo inuu ciyaari doono, waxaana fursad loo siinayaa inuu ka shaqeeyo sidii uu u heli lahaa koox kale oo uu Old Trafford uga wareego. Sergio Romero ayaa isaguna doonidaas oo kale saaran, waxase uu goolhayaha reer Argentina maalmo ka hor kusoo laabtay tababarka.
Victor Lindelof iyo Anthony Martial ayay dhakhaatiirta kooxdu qiimayn doonaan xaaladdooda kaddib markii ay usoo ciyaareen Sweden iyo France, laakiin ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo laga sheegayo xaaladdooda caafimaad.
Donny van de Beek ayaa noqday ciyaartoyga ugu horreeya ee helay kalsoonida tababare Solskjaer ka hor xili ciyaareedka bilowga ah, waxaanu bandhig heersare ah muujiyey ciyaartii saaxiibtinimo ee guul-darradu kasoo gaadhay ee Aston Villa ay 1-0 kaga badisay usbuucan horraantiisii.
Harry Maguire oo loo damaanad-qaaday inuu sii haysto kabtannimada kooxda kaddib dhibaatooyin uu ku galay waddanka Giriiga oo sababay in maxkamad la saaro, ayaa taam u ah kulankan, halka Rashford iyo Luka Shaw ay horeba u ciyaareen kulankii saaxiibtinimo ee Villa.